Wararka - Qorshaha cusub ee tamarta cusub ee Japan ayaa qorshaynaya inuu yareeyo qiiqa kaarboonka oo barbar socda tamarta qoraxda iyo nukliyeerka
Qorshaha cusub ee aasaasiga ah ee tamarta Japan wuxuu qorsheynayaa inuu yareeyo qiiqa kaarboonka qiiqa si is barbar socda tamarta qoraxda iyo nukliyeerka
Marka laga hadlayo qabyo -qoraalka dawladda Japan tamar cusubisku -darka (qaab -dhismeedka korontada) ee 2030, wuxuu galay heerkii ugu dambeeyay ee isuduwidda. Waxaa la qiyaasayaa in saamiga tamarta la cusboonaysiin karo sannadka 2030 -ka uu kor u kici doono in ka badan 10 dhibcood boqolkiiba 36% ilaa 38%, tamarta nukliyeerkana la ilaalin doono. Hadda 20% ilaa 22%. Nihon Keizai Shimbun ayaa soo sheegay in dowladda Japan ay rajaynayso in dib-u-habaynta isku-darka tamarta, ilaha tamar-eber-ka-baxa ay noqon doonaan ku dhawaad ​​60% wadarta guud, taasoo yareyn doonta qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo inta lagu jiro korontada.
Wasaaradda Dhaqaalaha, Ganacsiga iyo Warshadaha ee Japan ayaa qorshaynaysa inay soo jeediso “Qorshaha Aasaasiga ah ee Tamarta” iyo isku -darka tamarta ee Guddi -hoosaadka Siyaasadda Aasaasiga ah ee Sahanka Kheyraadka iyo Sahanka Tamarta (Wakaaladda Wadatashiga ee Wasiirka Dhaqaalaha, Ganacsiga iyo Warshadaha) July 21 qabyo. Marka la eego “Qorshaha Aasaasiga ah ee Tamarta” hadda, bartilmaameedyada tacliinta tamarta ee Japan ee 2030 waa 22% ilaa 24% tamarta la cusboonaysiin karo, 20% ilaa 22% tamarta nukliyeerka, iyo 56% dhalinta awoodda kuleylka.
Qabyo -qoraalka “Qorshaha Aasaasiga ah ee Tamarta” oo la soo jeedin doono markan wuxuu daaha ka qaadayaa hadaf cusub. Ka sokow kordhinta tamarta la cusboonaysiin karo iyo joogtaynta saamiga tamarta nukliyeerka, saamiga korantada kuleylka ayaa loo dhimi doonaa 41%. Gaar ahaan, si loo gaaro yoolka cusub, tiro badan oo tamarta qorraxda ah ayaa la soo bandhigi doonaa. Wasaaradda Dhaqaalaha, Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa dhawaan soo jeedisay in kharashka dhalinta korontada cadceeda marka la gaaro 2030 -ka uu ka hooseeyo kan quwadda Nukliyeerka, taasoo ka dhigaysa habka ugu jaban ee korontada laga dhalin karo markii ugu horreysay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii adkaanaysa in la helo dhul fidsan oo ah meeshaqorraxda qorraxda waa la rakibay, taas oo adkeyneysa in la gaaro.
Marka laga hadlayo tamarta nukliyeerka, in kasta oo ay dawladda Japan rajaynayso in ay sii waddo saamiga hadda ee soo saarista korontada marka la gaaro 2030 -ka, gundhigga ayaa ah in dhammaan 27 -ka unug ee tamarta nukliyeerka ee shirkadaha korontada ee gaarka ahi ay codsadeen in ay dib -u -bilaabaan hawlgallada ay shaqayn karaan, halka 10 oo keliya ay hadda shaqeynayaan. Qorshaha cusub ee “Aasaasiga Tamarta” sidoo kale ma diiwaan geliyo baahida loo qabo in la dhiso ama la dayactiro xarumaha tamarta nukliyeerka. Waa wax laga walwalo in dhalinta tamarta nukliyeerka ay sii yaraanayso mustaqbalka. Japan waa inay gaarto hadafka ah inay gaarto “kaarboon dhexdhexaad ah” marka la gaaro 2050, rajaduna waa mid aan muuqan.
Waqtiga dhejinta: Jul-23-2021